Jürgen Klopp oo farxad darteed la ilmeeyay kaddib markii ay Liverpool ku guuleysatay Premier League – Gool FM
(Liverpool) 26 Juun 2020. Tabaraha kooxda Liverpool ee Jürgen Klopp, ayaa carabka ku adkeeyay inay arrin layaab ah tahay in la gula guuleysto horyaalka Premier League kooxdan markii ugu horeysay mudo 30 sano ah kaddib.
Reds ayaa ku guuleysatay horyaalkii ugu horreeyay ee Premier League tan iyo 1990-kii, kaddib markii ay Manchester City guuldarro 2-1 kala kulantay kooxda Chelsea, ciyaar xalay ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee ka tirsaneyd kulamada 31-aad.
Kaddib markii la xaqiijiyay in Liverpool ay ku guuleysatay horyaalka Premier League, Jürgen Klopp oo awoodi waayey inuu ilmada ceshado ayaa wuxuu wareysi ku bixiyay shabakada “Sky Sports” wuxuuna yiri:
“Tani waxay aheyd wax aan mudo badan ku riyooday, kuma fikirin inaan ku noolaan doono waqtiyo sidan oo kale ah”.
“Waxaan fariin u dirayaa taageerayaasha Liverpool, guushaani waxaa iska leh dhammaantiin, u dabaal dega oo sameeya wax walab oo aad rabtaan, laakiin ku sugnaada guryihiina”.
“Koobkan waxaan hadiyad kaga dhigeynaa halyeygeena Kenny Dalglish oo sugayey mudo 30 sano ah, iyo sidoo kale halyeyga Steven Gerrard”.
“Inaad noqoto geesiga kooxdan ayaa ah arrin qaas ah, waa guul iyo farxad weyn inaan la shaqeeyo ciyaartoydan, oo qabtay shaqo cajiib ah seddexdii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay si ay ugu guuleystaan ​​horyaalka”.
Si kastaba ha noqotee, Jürgen Klopp ayaa noqday tababarihii ugu horreeyay reer Germany ah ee ku guuleysta horyaalka Premier League taariikhda kubbadda cagta Ingiriiska.